एकीकृत समाजवादीबाट को-को बन्दै छन् मन्त्री? फाइनल नाम लिस्ट
September 27, 2021 N88LeaveaComment on एकीकृत समाजवादीबाट को-को बन्दै छन् मन्त्री? फाइनल नाम लिस्ट
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको एक नेताले बताए। मन्त्रीका लागि एकीकृत समाजवादीले ६ जनाको नाम बुझाएको हो। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीका लागि विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङको […]
जब एयर होस्टेजले रुँदै भने, ‘तपाईहरूलाई बँचाउन सक्दो कोसिस गर्छौं’ (भिडियाे सहित)
September 27, 2021 N88LeaveaComment on जब एयर होस्टेजले रुँदै भने, ‘तपाईहरूलाई बँचाउन सक्दो कोसिस गर्छौं’ (भिडियाे सहित)
काठमाडाैं । सोमबार बिहान सवा ८ बजे बुद्ध एयरको विमान ७३ जना यात्रु लिएर विराटनगरका लागि उड्यो । करिब एक घण्टा उडान समय रहेको विमान विराटनगरको आकाशमा निर्धारित समयमा पुग्यो पनि । जब पायलटले अवतरण गर्नअुघि ल्याण्डिङ गेयर झार्न खोजे, ल्याण्डिङ गेयर झरेन । समस्या देखियो । विमानले ७–८ पटक विराटनगरको आकाशमाथि फन्को मारिरह्यो । […]
एयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो – जहाज भित्र यात्रीको अनुभव
September 27, 2021 N88LeaveaComment on एयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो – जहाज भित्र यात्रीको अनुभव
काठमाडौ । सोमबार काठमाडौंबाट विराटनगर जान बुद्ध एयरको विमान चढ्दा यात्रुले उनीहरुको जिवनमा के हुनसक्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । जब जहाज विराटनगर पुग्यो अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिग गियरले काम नगरेपछि अवतरण हुन सकेन । विमान चालकले विराटनगरकै आकासमा धेरै पटक फन्को लगायो । तर पनि चक्का खुलेन । विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि फेरि […]
September 27, 2021 N88LeaveaComment on विमलेन्द्र निधिको संरक्षणमा सुर्ती ब्यापारी विश्वनाथको गोरखधन्दा!
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो समय अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र लुकाउने प्रचलन गढ्दै गएको छ। विभन्न क्षेत्रवाट भएको अनुसन्धानले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव तस्करी र बैंकिङ अपराधबाट अवैध आर्जन गर्ने र उक्त पैसा लुकाउने प्रचलन वढेको देखाएका छन्। यसरी अवैध आर्जन गर्नेहरुलाई राजनीतिक दलकै ब्यक्तिहरुले संरक्षण गर्ने गरेको पाईन्छ। कतिपय घट्नाक्रमले यसलाई पुष्टी पनि […]
एकैदिन वुद्ध एयरका दुई जहाजमा समस्या, जहाजभित्र चल्याे यात्रुको रुवावासी
September 27, 2021 September 27, 2021 N88LeaveaComment on एकैदिन वुद्ध एयरका दुई जहाजमा समस्या, जहाजभित्र चल्याे यात्रुको रुवावासी
काठमाडाैं । काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज ल्यान्डिङ गियर नखुल्दा झन्डै दुई घण्टापछि काठमाडौंमै अवतरण गरिएको छ । बायाँपट्टिको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं फर्किनु परेको बुद्ध एयरले जनाएको छ । ८ बजेर ३३ मिनेटमा काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको अल्फा नोभेम्बर इन्डिया जहाज विराटनगरको आकाशमा दुई फन्को लगाएर काठमाडौं फर्किएको हो […]
September 27, 2021 N88LeaveaComment on एमाले फेरि फुट्दैछ ?
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री एवं कुटनीतिज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त (चाणक्य)का भनाइ स्मरण गरे । चाणक्य वाणी उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘सही समयमा सही कार्य गर्न सकिएन भने एक दिन समयले नै त्यो कार्यको सम्भावना समाप्त गरिदिन्छ ।’ आतंकवाद, कोभिड–१९ र आफगानिस्तान मुद्दामा […]
काठमाडाैँ । हिन्दु नेपालीहरुकाे महान पर्व दशैँ अरु पर्व भन्दा अलि विशेष र हर्षाेल्लासका रुपमा मनाउने प्रचलन छ । दशैँमा ठूला बडा मान्यजनकाे हातबाट टीका लगाउने आशिर्वाद लिने मात्र हाेइन मासु खाने पर्वकै रुपमा हेरिन्छ । पछिल्लाे समयमा अस्वस्थकर खानपान पनि बढेकाेले डाक्टरहरुले खानपानसँगै स्वास्ठ्यकाे पनि ख्याल गर्न सुझाएका छन् । दशैँमा अत्यधिक बढी मदिरा, […]
September 27, 2021 N88LeaveaComment on क्याप्टेन शेर्पा : जसले ७३ यात्रुसहित बुद्ध एयरको जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गराए
काठमाडौं । सोमबार बिहान काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको कलसाइन 9N-ANI, उडान नम्बर ७०१ को जहाजको ककपिट कमाण्ड सम्हाल्दै दिए आङगेलो शेर्पा । बुद्ध एयरका अनुभवी एवं सिनियर पाइलट क्याप्टेन विराटनगरको आकाशमा पुगिसकेका थिए । अवतरण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विमानको ल्यान्डिङ गेयर नखुलेपछि शेर्पाले विमानको पुनः उचाई बढाए । जसका रहेका यात्रुहरु एक्कासी आत्तिए […]
September 27, 2021 N88LeaveaComment on सुध्रिएनन् पूर्व युवराज पारस : फेरि अर्की युवती च्यापेर घुम्दै !
काठमाडौ । पूर्व युवराज पारस शाह बिग्रिएका खबर दिन दिनै बन्ने गरेका छन् । पूर्व राजाको छोरा यस्तो नभइदिएका भए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चिन्ता भएकालेपनि यस्ता समाचार बन्छन् । यतिबेला फेरी पारस शाह टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्नुभएको छ । पारस शाह मध्यराति ठमेलमा युवती सहित देखिएका छन् । युवती हेर्दा निक्कै आर्कषक, पारस […]
काठमाडौं । एक किशोरीको माया प्रेमका कारणले ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । शव फेला परेको तीन दिनपछि ती किशोरीको हत्या गरेको आरोपमा फुङ्लिङ नगरपालिका- १० फुरुम्बुका २४ वर्षीय रामकुमार कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । तीन दिनअघि अर्थात् गएको शुक्रबार बिहान फुङ्लिङ नगरपालिका- ७ दोखुको सेती चौतारा नजिक निगाले भीरमा १८ […]